Codecs Blu-ray: Waa maxay Codecs iyo sida loo ciyaaro Blu-ray Movies
1. Play Blu-ray on PC
2. Gubashada disc Blu-ray
3. Buy filimada Blu-ray online
4. codec Blu-ray
5. Free Blu-ray software
6. Blu-ray qaabab audio
7. Blu-ray vs. DVD HD
> Resource > DVD > Waa maxay Blu-ray Codecs iyo sida loo ciyaaro Blu-ray Movies?
Waa maxay Codecs Blu-ray iyo sida loo ciyaaro Blu-ray Movies?
Ultimate DVD iyo xal video kuu oggolaanaysa in aad loogu badalo video iyo dvd guriga si video in kasta oo qaab 30X ka dhaqso badan ka hor; gubi videos in DVDs. Baro More >>
Trial Free Trial Free
Guba kasta oo video, audio ama qaab image si DVD waqti. Ku kaydi aad jeceshahay Hollywood Movies ama aad masterpiece u gaar ah. Baro More >>
Blu-ray ayaa meel lagu kaydiyo weyn, oo ay tahay meeshii ay sheekada bilaabmin. A lakabka hal disc Blu-ray kaydiso yaabaa xogta ilaa 25GB, iyo lakabka dual Blu-ray ilaa disc in 50GB ah. Waxaa la gaaray labo gool ee HD DVD dhigma, waana sababta ay muhiim u ah sababta cajalid Blu-ray adkaaday HD DVD ee dagaalka.
Wixii codec video ah, halka HD DVD kaliya taageeraa MPEG-2 taas oo la mid ah la DVD, disc Blu-ray sidoo kale taageertaa MPEG-4 AVC iyo SMPTE VC-1, MPEG-2 ka sokow. Hoos waxaa ku qoran ka isbarasho faahfaahsan oo ka mid ah codecs Blu-ray . Sida raacay, waxaad ku baran doontaa sida loo ciyaaro media player guud iyo ciyaaryahanka Blu-ray si uu u daawado filimada Blu-ray aan ku rakibidda codecs Blu-ray.
Codec A waa barnaamij computer ah ee ku jira Deji iyo kelmadaha warbaahinta leh ama aan lahayn khasaaraha tayo leh. Blu-ray disc inta badan u adeegsanaya codecs video kaydinta qeexitaanka sare xogta:
Tani waa codec ah lossy video isticmaalo in HD DVD iyo cajalid Blu-ray hore labada. Inkastoo MPEG-2 oo loo isticmaali karo sida codec qeexitaanka sare, waxa aan filaayo in heerka yara hooseeya (laakiin sawirada tayo sare leh). Sidaa darteed, istuudiyaha badan movie hadda u baddashaan codecs video kale oo disc Blu-ray.
Waa magaca rasmiga ahayn ee H.264 / MPEG-4 Qaybta 10 ama AVC (Advanced Video sireed). MPEG-4 AVC waa ugu balaadhan looga isticmaalaa video codecs in cajalladaha Blu-ray. Waxa ay taageertaa 4096x2304 pixels xalinta iyo ilaa 26.7 Mbps u heerka yara. Tani waa video ka codec filaayo in Blu-ray, oo koriyo sawir tayo sare leh xitaa heerka xoogaa hoos u badan MPEG-1 ee VCD.
Ka sokow loo isticmaalo in cajalladaha Blu-ray, MPEG-4 AVC (H.264) codec ayaa sidoo kale si weyn loo qaatay in ay sii qulquli online videos, sida YouTube, vimeo, iyo Lugood dukaanka.
VC-1 waxaa markii hore soo sameeyay sida video format ah lahaansho by Microsoft, oo la sii daayay sida SMPTE qaab video caadiga ah si rasmi ah April 3, 2006. SMPTE VC-1 waa ka duwan ugu wanaagsan ee MPEG-4 AVC codec u disc Blu-ray. Waxa ay taageertaa oo isdhaafsan video isku xigxigta, iyada oo aan diinta ugu horeysay horusocod ah. Dabcan, VC-1 ayaa sidoo kale taageertaa horumar content Deji.
Blu-ray Player for All Codecs Blu-ray
Waxaad ciyaari karo filimada Blu-ray ciyaartoyda Blu-ray kala duwan ee Windows, sida Cyberlink ee PowerDVD, Corel ee WinDVD, iyo Arcsoft ee TotalMediaTheatre. Dadka isticmaala Mac, fursad u xadidan yahay. Macgo Blu-ray Player waa Blu-ray kowaad ee ugu fiican sheegay Player for Mac (Dhab PC iyo Mac version laga heli karaa labadaba). Ciyaartoydan Blu-ray sida caadiga ah loo soo dajiyo lahaa video gaar ah ay codecs u disc Blu-ray aadan si inaad si loo soo dajiyo codec Blu-ray naftaada. Waxyaalahan oo dhan ciyaartoyda Blu-ray ku kacaysaa lacag badan. Haddii loo baahdo, isku day DAPlayer (freeware) ama heli Macgo Blu-ray Player lacag la'aan ah 3 bilood.
Sida loo Guba cajalid Blu-ray (BD-R / RE) la ImgBurn u Free
Free Blu-ray Software inay Play iyo Guba Saxannada Blu-ray
Waa maxay nooca qaabab ma DVD ah Player Support?
Top 5 Open Source DVD qoraalka Softwares
DVD9 VS DVD5, Top 10 Khilaaf yaabaa inaadan ogayn
Sida loo Guba Video Faylal ay si DVD on OS X Yosemite
Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa MKV? Xalka
Sida loo Guba DVD ka Vuze la Vuze in DVD gubi (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo sameeyo DVD ka fiidiyo HD ah u DVD Players Normal